DEG DEG: Gen Muuse Xasan Cabdulle oo Loo Doortay Gudoomiyaha KMG ee Baarlmaanka Soomaaliya | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Monday, August 20th, 2012 at 01:29 pm DEG DEG: Gen Muuse Xasan Cabdulle oo Loo Doortay Gudoomiyaha KMG ee Baarlmaanka Soomaaliya
Muqdisho (RBC) Gen Muuse Xasan Cabdulle oo ah shakhsiga ugu da’da weyn xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa goordhow lo doortay gudoomiyaha kumeelgaarka ee Soomaaliya kaasoo sii gudoomin doona shirarka baarlamaanka.
Gen Muuse oo ah 72 jir horeyna uga tirsanaa ciidamadii Xooga Dalka ayay dhamaan xubnaha baarlamaanka cusub ee dalka oo shir ku leh haatan xerada Xalane u doorteen inuu si ku meelgaar ah u sii hogaamiyo shirarka baarlamaanka.
Gen Muuse oo hadal kooban ka jeediyey goobta shirka baarlamaanka uu ka socdo ayaa ku dhawaaqay in kalfadhigii ugu horeeyay ee baarlamaanka uu furan yahay laga bilaabo maanta kulan kalana berito ay yeelan doonaan kulan kale.
Gudoomiyaha cusub wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in musharixiinta u tartameysa xilka afhayeenka baarlamaanka ay codsiyadooda ku soo gudbin karaan laga bilaabo maalinta berito ee Talaadada ah illaa Sabtida 25-ka Agoosto. Wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in doorashada afhayeenka cusub ay dhacayso xilligaasi.
Madasha shirka waxaa lagu dhaariyey in ka badan 250 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka cusub oo noqnaya xubnihii ugu horeeyay ee baarlamaanka dalka.